ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့သူမရဲ့ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ သစ်တံခါး ဆရာတော်ဘုရာကြီးအားအလှူအတန်းတွေပြုလုပ်ခွင့်ရလို့ပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့် – XB Media Myanmar
ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါ အဝင် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ အချိန်အတော်ကြာအနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နား ထားခဲ့ပြီးယခု နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကြော်ငြာတွေနဲ့အတူ အနုပညာအလုပ်တွေကို ပြန်လည် လု ပ်ကိုင်နေ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေး ပဲဖြစ် ပါတယ်။
ဇင်ဇ င်ဇော်မြင့်ကတော့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ၆ တန်းနှစ်ထဲကကိုးကွ ယ်ပြီး မေတ္ တာတရားကြီးမားတဲ့ ကျေးဇူးရှင်သစ်တံခါးဆရာတော်အား အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလိုလှူဒါန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း မွေးနေ့ရှင်ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ကအရမ်းပြီးပြည့်စုံ ခဲ့ရတဲ့ မွေး နေ့လေးဖြစ်ကြောင်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ် ပါတယ် ။အဲဒီ အကြောင်းလေးကိုတော့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်က”၂၃. ၆. ၂၀၂၀မှာ ကျရောက်တဲ့မေလေးရဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာမှာ မေလေးငယ်ငယ်ထဲက ၆ တန်းထဲကကိုးကွယ်တဲ့မေတ္တာတရားကြီး မားတဲ့သဘောဖြူတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ကျေးဇူးရှင်သစ်တံခါးဆရာတော်မထင်မှတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်ကြွ ရောက်ချီးမြှင့်ပေးလို့ မင်္ဂလာရှိတဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.
မွေးနေ့ရှင်မေလေးနဲ့မိသားစုကလဲ ဆရာတော်ကိုအလှုဆပ်ကပ်ပြီးအရမ်းပြီး ပြည့်စုံခဲ့ရတဲ့ မွေးနေ့လေးပါ. အားလုံးလဲကျန်းမာချမ်းသာအနာရောဂါ ကင်းဝေးကောင်း ကျိုးလိုရာပြည့် ကြပါစေသား အခုချိန်ထိချစ်ခင်ပေးကြတဲ့မေတ္တာထားပေးကြတဲ့ တစ်ဦးတယောက်ချင်း စီကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ပြုသမျှကုသိုလ်ထပ်တူရကြပါစေ”ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ရ က်မှာရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မှာကျရောက် တဲ့ မွေးနေ့ ရှင်လေး ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ရဲ့ မွေးနေ့အလှူလေးအတွက်သာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါဦးနော်…။
Source:Zin Zin Zaw Myint
ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္ကေတာ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္အႏုပညာရွင္ေတြထဲက တစ္ေယာက္အပါ အဝင္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာအႏုပညာအလုပ္ေတြကို ရပ္နား ထားခဲ့ၿပီးယခု ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔အတူ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ျပန္လည္ လု ပ္ကိုင္ေန တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ကေတာ့ ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္ရဲ့ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလး ပဲျဖစ္ ပါတယ္။
ဇင္ဇ င္ေဇာ္ျမင့္ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ၆ တန္းႏွစ္ထဲကကိုးကြ ယ္ၿပီး ေမတ္ တာတရားႀကီးမားတဲ့ ေက်းဇူးရွင္သစ္တံခါးဆရာေတာ္အား အလွူအတန္းေတြျပဳလုပ္ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုလိုလွူဒါန္းခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္း ေမြးေန႔ရွင္ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္ကအရမ္းၿပီးျပည့္စုံ ခဲ့ရတဲ့ ေမြး ေန႔ေလးျဖစ္ေၾကာင္း သူမရဲ့လူမွုကြန္ရက္မွာေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္ ။အဲဒီ အေၾ ကာင္းေလးကိုေတာ့ ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္က”၂၃. ၆. ၂၀၂၀မွာ က်ေရာက္တဲ့ေမေလးရဲ့ ေမြးေန႔မဂၤ လာမွာ ေမေလးငယ္ငယ္ထဲက ၆ တန္းထဲကကိုးကြယ္တဲ့ေမတၱာတရားႀကီး မားတဲ့သေဘာျဖဴ တဲ့ ေအးခ်မ္းတဲ့ ေက်းဇူးရွင္သစ္တံခါးဆရာေတာ္မထင္မွတ္ပဲ ကိုယ္တိုင္ႂကြ ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ေပး လို႔ မဂၤလာရွိတဲ့ေမြးေန႔မဂၤလာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္.
ေမြးေန႔ရွင္ေမေလးနဲ႔မိသားစုကလဲ ဆရာေတာ္ကိုအလွုဆပ္ကပ္ၿပီးအရမ္းၿပီး ျပည့္စုံခဲ့ရတဲ့ ေမြးေန႔ေလးပါ. အားလုံးလဲက်န္းမာခ်မ္းသာအနာေရာဂါ ကင္းေဝးေကာင္း က်ိဳးလိုရာျပည့္ ၾကပါေစသား အခုခ်ိန္ထိခ်စ္ခင္ေပးၾကတဲ့ေမတၱာထားေပးၾကတဲ့ တစ္ဦးတေယာက္ခ်င္း စီကိုေ လးစားေက်းဇူးတင္ပါတယ္. ျပဳသမၽွကုသိုလ္ထပ္တူရၾကပါေစ”ဆိုၿပီး သူမရဲ့လူမွုကြန္ရ က္မွာေ ရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးေရ ဒီေန႔မွာက်ေရာက္ တဲ့ ေမြးေန႔ ရွင္ေလး ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္ရဲ့ ေမြးေန႔အလွူေလးအတြက္သာဓုေခၚခဲ့ၾကပါဦးေနာ္…။